I-BMW X3 igudla kamnandi nasezintabeni | Isolezwe
I-BMW X3 igudla kamnandi nasezintabeni
ezezimoto / 26 August 2018, 11:01am / FANELESIBONGE BENGU
IGAMA le-albhamu kaSun-El Musician eshisa izikhotha kulezi zinsuku ethi Africa to the World, ishisa izikhotha nje, igabe ngezingoma okubalwa kuzo iSonini, Akanamali, Bamthathile, Ntaba Ezikude, The Wave nezinye.
Okungikhumbuza isihloko sale albhamu wukuthi ungasisebenzisa ukuchaza iBMW X3 entsha ngoba ikuthatha ikubeke ngisho ugudla izintaba. Yakhiwa e-Afrika bese ithunyelwa emhlabeni jikelele. Empeleni ikhiqizwa embonini yakwaBMW, iPlant Rosslyn, ePitoli bese idayisa kuleli iphinde ithunyelwe emazweni angaphandle.
KwaBMW bathi isidingo sezimoto zabo ezingama-X sikhule ngo-30% emhlabeni jikelele kusukela baqala ukudayisa iX5 ngo-1999.
Enye yezimoto ezibalulekile ezingama-X yi-X3. Esiyivivinyayo lapha yi-X3 xDrive 20d. Ngaphansi kwebhonethi bathukuse injini engu-2.0 turbodiesel enamandla angu-140 kW netorque engu-400 Nm. Bathi ukuze ifike ku-100km/h kade imile kuyithatha imizuzwana engu-8.0 kanti ijubane elikhulu ngu-213 kW. U-gearbox wayo uyi-Eight-speed Steptronic osiza kakhulu endleleni eyonga ngayo ngoba ushintsha ngokushesha.
Emgwaqweni le moto ihamba kamnandi yize inyathela ngamasondo anamarimu angu-19 inch futhi amandla iwafaka buthule. Etiyeleni ithule ngaphakathi futhi izihlalo zayo zesikhumba zintofontofo. Nasemgwaqweni oyibhuqu ayizweli kakhulu futhi okuhle wukuthi iphakeme. Bheka ngoba i-approach angle ingu-25.7 degrees kuthi i-departure angle ibe ngu-22.6 degrees bese kuthi i-breakover angle ibe ngu-19.4 degrees. Ubuntofontofo bulekelelwa nawukuthi uyawuhlela ushesi ukuthi ube njani ngokuyifaka ku-ECO PRO, COMFORT noSPORT. Lokho kuphinde kuhlele nendlela ewafaka ngayo amandla uma unyathela amafutha nendlela isiteringi esizwakala ngayo esandleni.
Yize kuyimoto ephakeme kodwa emakhoneni ibibambelela kodwa kubuye kusho ukuthi inkulu futhi umshayeli uhleli phezulu. Kodwa ukudonsa kwayo ngamasondo amane kuyasiza ukuthi ihlale thaqa.
Njengoba ngike ngaphawula ngo-gearbox wayo, uma uthanda uzishintshela wena kuma paddle shift ngemuva kwesiteringi futhi kuyasho ukuthi yiBMW ngoba ishintsha ngokuphazima kweso.
Ngebanga lika-100km/* ibidla amalitha kaphethroli angu-7.3 futhi engikuqaphelile wukuthi ukwazi ukuhamba ibanga elide uma igcwele ngoba ithangi likhulu futhi idla kahle.
Le moto yenza impilo yakho ibe lula uma uyishayela ngoba uma uthanda ufaka iDriving Assistant Plus ebifakiwe kwebesiyivivinya.
Ezintweni ezifika neDriving Assistant Plus kubalwa ukuthi izijikise kancane isiteringi uma iphuma emzileni, Adaptive Cruise Control eyenza ukuthi ihambe ngejubane olihlelile iphinde inciphise uma kukhona imoto ephambi kwakho futhi ime nse uma kunesidingo. Ebesihamba ngayo bebeyigaxe neHead-Up Display eyenza umshayeli amehlo awathi njo emgwaqweni bese kuvela ijubane nenkombandlela kwi-windscreen.
Yimoto yomndeni kwazise ibhuthi imumatha impahla engu-550 litres kanti uma ulalise izihlalo ifinyelela ku-1 600 litres. Uhambo alunasizungu ngoba phambili kune-screen lapho uxhuma khona iselula nge-Apple CarPlay udlale umculo okwiselula. Uma usuphumile emotweni iyayimaka indawo opake kuyo ivele efonini. Kukhona neBMW Connected eyenza ufunde izindaba futhi nohambo uluhlele kahle ngoba kuvela nesimo sezulu.
Okhakhayini nihamba nibuka isibhakabhaka ngenxa ye-panoramic sunroof futhi ngaphakathi uyikhanyisa ngemibalabala eyehlukene, nokuyinto eyengeza ubuhle.
Ngaphandle yinhle futhi ne-grille yayo igolozile nokuyenza igqame uma iqhamuka.
Ezokuphepha zihlanganisa i-Intelligent Emergency Call eyenza ukuthi uma usengozini ithumele indawo nobucayi bengozi kwabezimo eziphuthumayo.
I-X3 ibukeka kahle futhi inenqwaba yobuchwepheshe obuyenza ibe yimoto eseqophelweni eliphezulu. Okuhle futhi wukuthi ibiza ngokwezinga lezimoto encintisana nazo njengoMercedes-Benz GLC, Audi Q5 nezinye.
Inani le-X3 xDrive 20d liqala kuR690 200